Codbixin: 64 % shacabweynaha reer Denmark, waxey rabaan in la xadido soo galootiga muslimiinta ah - NorSom News
Codbixin: 64 % shacabweynaha reer Denmark, waxey rabaan in la xadido soo galootiga muslimiinta ah
Codbixin uu qaaday wargeyska Berlingske ayaa lagu ogaaday, in 64% dadweynaha reer Denmark ay rabaan in la xadido soo galootiga islaamka ah. Waxaana tirada dadka raba in la xadido soo galootiga muslimiinta ah ku yimid kor u kac gaaraya 10%, iyada oo sanadkii 2015 ay ahaayeen 54%.
Tirada dadka soo galootiga ah ee iska soo dhiiba dalka Denmark, ayaa hoos u dhacday dhowrkii sano ee ugu danbeeyay. Kadib markii ay go´aano tiro badan soo rogtay dowlada dalkaas. Hadana wali waxey dadka reer Denmark sii rabaan in lasii xadido soo galootiga ka imaanayo wadamada islaamka ah.
Isla codbixintan ayaa lagu ogaaday in dad badan oo reer Denmark ah ay rabaan, in haweenka laga mamnuuco inay xijaabtaan. Sidoo kalena soo galootiga shuruud looga dhigo inay aqbalaan dhaqanka dalkaas.
Arintan ayaa tusaale cad u ah isbadalka ku yimid shucuubta dalalka reer galbeedka. Iyada oo cabsida iyo shakiga laga qabo soo galootiga islaamka ah, ay kor u kacday dhowrkii sano ee ugu danbeeyay.
Previous articleWarbaahinta Norway oo si aad ah u hadalheyso cabashada soomaalida ee barnaamijkii NRK
Next articleMaxaan ka baran karnaa cabashadii soomaalida ee barnaamijkii NRK?